मलेसियामा नेपाली युवती यौ’न र गलत प्रेम सम्बन्धका कारण जे’लको कोठरीमा पुग्दै ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा नेपाली युवती यौ’न र गलत प्रेम सम्बन्धका कारण जे’लको कोठरीमा पुग्दै !
मलेशियामा कार्यरत नेपाली युवाहरु मात्रै हैन , नेपाली युवतीहरुको सङ्ख्या पनि अत्याधिकनै छ्न। यहाँ कार्यरत नेपाली युवतीहरु नेपाली युवाहरुसंगै बाङ्लादेश , पाकिस्तान , भारत , म्यानमार , मलेसिया लगायत विदेशी मुलका युवाहरुसंगको ग”लत प्रेम सम्बन्धले जे”ल पर्नेदेखि विभिन्न का”नुनी सजायको भागिदार हुने गरेको तथ्यांक दूतावासमा सुरक्षित छ्न।
नेपाली युवतीहरुले जो”शमा होस् गुमाउँदा साथै विभिन्न किसिमको लहैलहैमा लाग्दा र कु”लतमा फस्दा बि”च्चलीमा पर्ने गरेको तथ्य पाइएको छ। विशेषगरि म्यानुफ्याक्चरिङ र हलुका सामान उत्पादन हुने कम्पनीहरुमा काम गर्ने नेपाली युवतीहरुको सङ्ख्या अत्याधिक हुने गर्दछन्।
कामकै क्रममा विदेशी युवाहरूसंग कुराकानी गर्दागर्दै प्रेम सम्बन्धमा पर्ने गरेको र कतिपयले त कम्पनी छाडी अ”वैधानिक बनि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने युवतीहरुको सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ।
साथै अ”वैध प्रेम सम्बन्धले ग”र्भवती भैइ ग”र्भधारण गराउने र कतिपयले त आफैंले बच्चा ज”न्माएर मा”र्ने गरेको पाइएको छ। आफैंले जन्म दिएर ब”च्चा मा”रेकै घट”नामा मलेशियामा दुईजना नेपाली युवती पक्राउ परेर जे”ल सजाय समेत भोगेको घट”ना ताजै छ्न।
अहिले पनि एकजना नेपाली युवतीले रुममै बच्चा जन्माएर मा”रेर पोको पारि पलास्टिक ब्यागमा राखेको आ”रोपमा प”क्राउ परेर जेल सजाय भोगिरहेका छ्न्। कतिपय त्यस्तो युवतीहरुलाई त रोजगारदाता कम्पनीहरुलेनै सुरक्षित साथ बेलैमा नेपाल फर्काइदिने गरेको बताईन्छ्।